Waadinews | Somali News and Entertainments | Archive | Health
Khaladaad Saamayn Caafimaad Oo Taban Inagu Yeelan Kara Oo Aynu Samayno Ramadaanta Dhexdeeda
Waxaa jira Khalaadad aynu samayno Ramadaanta dhexdeeda oo Caafimaadkeena iyo Adkaysigeena dhinaca soonka saamayn xun ku yaalan kara waana kuwan: 1- Xilliga Suxuurta oo Biyo Badan la Cabbo: Qofka soomaya oo biyo badan cabaa xilliga suxuurta waxa ay ku keenaan in kelyuhu ay aad u shaqeeyaan oo ay biyo badan jidhka ka saaraan, dabadeeto uu […]
Sababaha keeno in dadka qaar ay ku naaxaan soonka iyo talada dhakhtarka
In kasta oo bisha Ramadaan ay dadka soomaa saacado aad u badan cunt iyo biyo laa’n ku joogaan, gaar ahaan marka ay sida sannadahan u dambeeyey dhacayey ay k usoo hagaagto bilaha xagaaga. Haddana waxaa marar badan oo kale dhacda in la arko dad Ramadaanka ku sii naxaa, halkii laga filayey in miisaankoodu hoos u […]
Shurufta ama Shiirka Digaaga oo la ogaaday in ay Qofka ka ilaalin karto Xanuunka Duumada iyo Fayraska ZIka
Inkasta oo ay layaab tahay haddan waxaa la ogaaday in urta digaagu ay kaa ilaalin karto xanuunka duumada ama Fayraska ZIKA, waa sida ay aamin sanyihiin saynisyahannadu. Tijaabooyin ay sameeyeen cilmi-baadhayaal U dhashay Sweden iyo Ethiopia ayaa shaaca ka qaaday in kaneecadu ay ka fogaato guriga ay ku nool yihiin digaagu. Cilmi-baadhayaashan ayaa aaminsan in […]
Ma Taqaanaa arrimihii Ugu badnaa ee dadku u dhinteen sannadkii 2017?
Celceliska cimriga dadweynaha adduunka oo ahaa sannadkii 1950-kii 46 sanno ayaa kor u dhaafay sannadkii 2015-kii 71 sanno. Haddaba inkasta oo taasi jirto haddana khatarta loogu jiro xannuunnada, xunnuunnada saf-mareenka ah iyo masiibooyinka lama filaanka ah ayaa noqotay arrin hoos-u-dhigaysa fursadaha lagu noolaan karo muddo dheer. Dhimashada ay sababaan arrimaha loogu cabsida badan yahay sida […]
Noocayada dhiiga iyo dabeecadaha bilaadan ka oo lagu kala garto dhiigta qofka
Maxaad Ka Taqaanaa Cudurka Dyslexia Oo Qofka Ku Adkeeya Wax-akhriska Astaamaha Lagu Garto Hababka Loo Dabiibi Karo?
Waxaa jira dad badan oo akhrisku uu ku adagyahay. Si kasta oo ay wax-u-bartaan marka ay noqoto in ay wax akhriyaan waxaa laga dareemaa carrab weyni, waxa ay akhriyayaan oo iskaga dhex daata, hingaadda qoraalka ereyada oo ku adkaata in ay dusha ka qoraan, xawaaraha akhriskooda oo yaraada ama ay awoodi waayaan in ay carrab […]
Halista Caafimaad ee Cudurka Cagaarshowga (Jooniska) Nooca “B” iyo sida looga hortagi karo
Maskaxda Dumarku Imisa Sanno Ayey Ka Da’yar Tahay Ta Ragga?, Keebaase Ahaan Cimri Dheer Ragga Iyo Haweenka?
Cilmi-baadhis cusub ayaa daaha ka fayday in maskaxda dumarku ay 4 sanno ka da’ yartahay ta ragga. Saynisyahannada ayaa ogaaday in maskaxda gabadha caafimaadka qabtaa ay ka da’ yartahay ku dhawaad 4 sannadood maskaxda ninka ay isku ayniga yihiin. Farqigan u dhexeeya maskaxda ragga iyo ta haweenka ayaa ah mid la dareemi karo laga soo […]
Shan Sababood Oo Ka Dhalan karta Garaacista Caruurta!
1. Garaacistu caruurta waxay ka lumisaa dhiifoonaanta iyo wax aqrinta badan. 2. Garacistu caruurta cadawad ayay ku beertaa. 3. Garaacistu waxay lumisaa kalsoonida curuurtu kugu qaban , dhiblaw ayay noqdaan. 4. Garaacistu, waxay dhibaataysaa korriinka maskax ahaaneed ee caruurta. 5. Garaacistu waxay lumisaa jacaylka iyo ixtaraamka caruurtu kuu hayaan. Hadaba si kasta oo caruurta qaladkoodu […]
WAA MAXAY XASAASIYAD? Qaabkee Loo Daweeye?
Xasaasiyadda waxa ay dhacdaa marka habka difaaca jirka ay walax shisheeye ah soo gasho oo caadi ahaan waxyeello u lahayn jidhka, balse difaaca jirka uu umaleeyo walaxdaas mid dhib ku ku ah jirka sidaasna uu ula diriro, Dabadeed dagaalkaas uu difaaca jirku qaadey ayey ka dhashaan inta badan calaamadaha xasaasiyada ee aad aragtàan. CALAAMADAHA XASAASIYADA. […]
Cilmi-Baadhis Yididiilo Ku Abuurtay Dadka La Nool Xanuunka Macaanka
Saynisyahanno Maraykankan ah ayaa daaha ka fayday dawo cusub oo la yidhaahdo “Harmine” taas oo lagu xakamayn karo xanuunka Macaanka labadiisa noocba. Cilmi-baadhayaal ka tirsan waaxda caafimaadka ee Hospitalka Mount Sinai oo ku yaalla New York ayaa sheegay in dawadani ay tarminayso unugyada Insulin-ka soo saara, taasina ay dawo wax-ku-ool ah u noqo karto Macaanka. […]
Sideed Caafimaad Daro Uu Sababi Karo Cabida Coffee kaga Madaw?
Bahda Arimaha Caafimad ka Ee Shabakada Caanka ah ee Waadinews Waxay Barnaamijka caafimadka idin ku soo diyaarisay Qodobadan laga qaado cabida coffee madaw ama coffee bigaysaka ah Hadaba hadii aad cabi jiray coffee madaw Oo Aad isku aragto La Xidhidh Dhaktar ama iska jooji 1.Hurdo La’aan 2.Xasilooni Daro iyo Degaananshiyo La’aan 3.Calool Xanuun 4.Lallabo iyo […]
Lix Caado Oo Khatar Gelinaya Caafimaadka Kelyaha,
In badan oo dadka ka mid ah ahmiyad ma siiyaan caafimaadkakelyaha, taasina waxay u horseedi kartaa xanuuno kala duwan oo gaadhi kara ilaaheerka (hawl-gabka kelyaha). Kelyuhu waxa ay ka mid yihiin xubnaha ugumuhiimsan jidhka qofka iyada oo ay ugu wacantahay shaqada wayn ee ay inoohayaan oo ah in ay jidhka ka saaraan sunta. Haddaba waxaa […]
Siddeed Tallaabo Oo Aad Ku Xoojin Karto Awooddaada Maskaxeed
Had iyo jeer waxaynu maqalnaa in Xusuusteenu ay sii daciifto markasta oo aynu sii waynaano, sidoo kalena fikirka iyo garashadu inagu yaraadaan. Haddaba Welli waxaa jirta yididiilo, waayo waxa jira tallaabooyin aynu ku horumarinayno Maskaxdeena. Halkana kaga bogo qodobadaas: 1-Jimicsigu waxa uu Ballaadhiyaa Maskaxda: Guud ahaan Jimicsigu waxa uu dardar geliyaa maskaxda, sidoo kalena marka […]
Dhawr Tallaabo Oo Aad Kaga Hortagi Karto Xanuunka Ilowshiyaha (Xusuus Guurka) Ama Alzheimer, iyo Waxyaabaha Sababa
Xanuunka Ilawshiyaha (Alzheimer) Waa nooc ka mid ah noocyada Asaasaqa ama xusuus guurka, waxaanu inta badan ku dhacaa dadka ayniga ah, Waa xanuun ku dhaca maskaxda oo wiiqa kartida qofku uu ku gudan karo hawl maalmeedkiisa. Xanuunkan oo u bilaabma si tartiib tartiib ah ayaa saameeya qaybaha maskaxda u qaabilsan Fikirka, xusuusta iyo Luqadda. Xanuunka […]
Jiilka Waqtigan Miyuu Ka Xusuus Liita Kuwii Ka Horreeyey, Maxaa Hoos U Dhiga Xusuusta Maxaase Kordhiya?!
Ma xasuusataa lambarada asxaabtaada iyo qaraabadaada marka aad u baahato? Waxaa laga yaabaa in aad xasuusato in yar oo faro ku tiris ah. Waqti xaadirkan dadku waxa ay is waydiiyaan maxaa u sabab ah in xusuustoodu ay ka yaraato intii hore. Socrates oo ahaa faylasuuf noolaa qarniyadii ka horreeyey Nebi Ciise waxa uu ka cabsi […]
Maskax badnaantu waa hibo uu Ilaahay siiyo cidda uu doono, waa awood qarsoon oo uu qofku leeyahay, taas oo u suurta galisa in uu noqdo ruux leh hal-abuurnimo, ikhtiraac iyo waxyaabo fiican oo uu bulshada ku soo kordhiyo. Haddaba Waxaa jira astaamo lagu tilmaansan karo ruuxa leh garaadka iyo maskaxda sida aadka ah uga sarraysa […]
Jimicsi Hal Saac Oo Maalintii Ah Waxa Uu Jidhka Ka Saaraa Barootiinnada Sunta Ah,
Cilmi baadhis caafimaad oo Caalami ah ayaa daaha ka fayday in qofka oo maalintii Jimicsada muddo hal saac ah ay jidhka ka caawiso in uu iska saaro Barootiinnada Sunta ah ee ku jira Muruqyada sidoo kalena ay qayb libaax ka qaadato daawaynta tabcaanimada iyo maliilka lafaha. Cilmi-baashitan ayaa waxaa sameeyey jaamacad ku taalla dalka Brazil […]
5 Faa’iido Oo Laga Helo Biyaha Kulul Ee Liin-Dhanaanta Leh Oo Qofku Cabo Isaga Oo Qatan
Liin-dhanaantu waxa ay ka mid tahay maadooyinka aadka ugu fiican caafimaadka, madaama ay faa’iidooyin badan u leeday Jidhka, balse xaddiga faa’iidadeedu waxa uu ku xidhanyahy qaabka loo isticmaalo. Khubarada Cuntada ayaa ku taliyey in subaxa hore la cabo biyo diirran oo lagu qasay liin-dhanaan iyada oo calooshu madhan tahay, khubarada ayaa daaha ka fayday 5 […]